Kumenywa umphakathi kowamakhono noNobuhle | News24
Kumenywa umphakathi kowamakhono noNobuhle
izithombe: zithunyelweUmcimbi kaNobuhle owaziwa ngokuthi uMiss Qadi/Nyuswa uzoba ngo mhla ka-25 kuLwezi (November).
INHLANGANO engenzi nzuzo eyaziwa ngokuthi yi-Khono Organisation ibambisene nenhlangano eyaziwa ngokuthi yi-Third World Movement imema umphakathi waKwaNyuswa, wasePinetown nakwezinye izindawo eThekwini ukuba uhlanganyele nawo emcimbini kaNobuhle owatziwa ngokuthi u-Miss Qadi/Nyuswa ozoba ngoMgqibelo mhla ka-25 kuLwezi (November) ozobe use Qadi Hall, oqala ngo-10 ekuseni uphele ngo 5 ntambama.
U-Miss Qadi/Nyuswa wasungulwa ngo-2012 futhi usiza intsha ngemfundaze nokthuthukise amakhono entsheni.
Lo mcimbi uzobe uhanjelwe osaziwayo kubalwa u-Dj Ma-Andee, uTravis Tramble noSphephelo Dlamini. Imali yabadala yokungena kuzoba u-R30 izingane kube u-R10. Inhlangano i-Third World Movement ihlele umcimbi wamakhono namathalente lapho kuzo bonakala khona izikole ezahluka hlukene ziqhudelana ngoMgqibelo mhla ka-9 kuZibandlela (December).
Lo mcimbi onesiqubulo esithi: Battle of High Schools Talent Show uzobe use-Qadi Hall lapho kuzobe kuculwa umaskandi, Rnb, hip hop ne-soul, kusinwa, kudanswa, kuthulwa izinkondlo, kumodelwa kuphinde kwethulwe namahlaya.
Lo mcimbi uzoqala ngo-9 ekuseni uphele ngo-5 ntambama.
Imali yabadala yokungena kuzoba u-R30 izingane kube u-R10.
Okhulumela iKhono Organisation uMnuz Nkosinathi Sithole uthe lezi zinhlangano zombili ziqinisekisa ukuthi zenyuse amathalente namakhono emphakathini.
Uma uthanda ukwazi kabanzi ngale micimbi shayela inombolo ethi: 076 173 5643 noma uthumele umyalezo ngekheli le email elithi: nathi375@gmail.com